कसरी तपाइँको मोबाइल मा QR कोड बचत गर्न को लागी मोबाइल फोरम
ईडर फेरेनो | 07/10/2021 16:00 | Android, अपरेटिंग प्रणाली
QR कोड को उपयोग केहि अधिक र अधिक दुनिया भर मा सामान्य छ। यो केहि छ कि उदाहरण को लागी हामी धेरै वेब पृष्ठहरु मा, वा अनुप्रयोगहरु मा हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोन मा प्रयोग मा पाउँछौं। यो धेरै प्रयोगकर्ताहरु को लागी आश्चर्य को लागी असामान्य छैन बाटो उनीहरु आफ्नो फोन मा त्यो QR कोड बचत गर्न सक्नुहुन्छ। चूँकि त्यहाँ समयहरु छन् जब हामी यसलाई फेरि प्रयोग गर्न को लागी हुनेछ र यो राम्रो छ यदि हामीले यसलाई बचाएका छौं, उदाहरण को लागी।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी कसरी हाम्रो एन्ड्रोइड फोन मा QR कोड बचत गर्न सक्नुहुन्छ, तब हामी तपाइँलाई यस सन्दर्भमा हामी विकल्पहरु बताउन जाँदैछौं। यस प्रकार, यदि कुनै पनी समय मा हामी एक को उपयोग गर्न को लागी, हामी यसलाई छिटो देखाउन सक्छौं, किनकि हामी यसलाई हाम्रो उपकरण मा गर्न जाँदैछौं।
QR कोड उपस्थिति को एक धेरै प्राप्त गरेको छ, उदाहरण को लागी एक वेब पेज मा प्रयोगकर्ताहरु लाई निर्देशित गर्ने तरिका को रूप मा। फोन को क्यामेरा खोलेर हामी यो कोड स्क्यान गर्न सक्छौं र हामी एक लिंक मा पहुँच दिईनेछ, ताकि हामी एक वेब पेज को उपयोग गर्न सक्छौं वा ताकि हामी फोन मा एक आवेदन डाउनलोड गर्न सक्छौं, उदाहरण को लागी। यो लोकप्रियताले यो महत्त्वपूर्ण बनाएको छ कि हामी जान्दछौं कि उनीहरुलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, किनकि उनीहरु कहीं जादैनन्।
एक पहलू कि धेरै प्रयोगकर्ताहरु हावी गर्न चाहानुहुन्छ QR कोड बचत गर्ने तरीका हो। त्यहाँ समय छ जब हामी यो आवश्यक हुन सक्छ र यदि हामी यसलाई फोन मा बचत गरीएको छ, तब यो धेरै सरल र अधिक सहज हुनेछ जहाँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न को लागी यो देखाउन को लागी सक्षम हुनेछौं। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरु यस सन्दर्भमा धेरै विकल्प छन्।
1 एन्ड्रोइड मा QR कोड बचत गर्नुहोस्
1.2 कोड छवि सुरक्षित गर्नुहोस्
1.3 एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
2 QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्
3 QR कोड के हो?
एन्ड्रोइड मा QR कोड बचत गर्नुहोस्
वास्तविकता त्यो हो त्यहाँ धेरै तरिकाहरु तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड फोन मा एक QR कोड बचत गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरु पनि साँच्चै सरल तरीकाहरु छन्, त्यसैले अपरेटि system्ग सिस्टम मा कुनै पनि प्रयोगकर्ता उनीहरु लाई प्रयोग गर्न को लागी सक्षम हुनेछन्, ताकि उनीहरु फोनमा त्यो कोड बचाउनेछन् र यो सधैं उपलब्ध हुन्छ। एक तरिका वा अन्य छनौट केहि हो कि धेरै मामिला छ, त्यो हो, दुबै राम्रो संग काम गर्दछ, यो अधिक प्रत्येक प्रयोगकर्ता को लागी प्राथमिकता को कुरा हो।
एक सरल विकल्प हो कि हामी यस सम्बन्ध मा रिसोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो केवल एक स्क्रीनशट लिन को लागी हो। यदि हामी एन्ड्रोइड मा त्यो QR कोड बचत गर्न चाहानुहुन्छ, हामी प्रश्न मा कोड को एक स्क्रीनशट लिन सक्छौं, ताकि यो हाम्रो फोन को ग्यालरी मा सुरक्षित गरिनेछ। जब आवश्यक छ, हामी भन्यौं क्याप्चर खोल्न सक्छौं र अर्को व्यक्ति हाम्रो स्क्रीन बाट सीधा कोड स्क्यान गर्न सक्षम हुनेछ।
यो केहि धेरै सरल छ, एक स्क्रिनसट लिने पछि केहि हो कि विशाल बहुमत छ एन्ड्रोइड मा प्रयोगकर्ताहरु को प्रदर्शन गर्दछ, त्यसैले यो हामीलाई धेरै समय लाग्दैन। यसको अतिरिक्त, यो केहि छ कि हामी दुबै एक फोन र एक ट्याब्लेट मा गर्न सक्छौं, ताकि अपरेटि system्ग सिस्टम मा कुनै पनी प्रयोगकर्ता यो विधि को सहारा लिन को लागी सक्षम हुनेछ यदि आवश्यक छ।
एक स्क्रिनसट लिन को लागी तरीका ब्रान्डहरु बीच थोरै फरक हुन्छ एन्ड्रोइड मा। केहि मा यो पावर बटन र भोल्युम डाउन बटन थिचेर गरिन्छ र अन्य ब्रान्डहरुमा यो ठीक छ यदि हामी पावर बटन र भोल्युम अप बटन थिच्छौं। पक्कै तपाइँ पहिले नै थाहा छ यो तरीका तपाइँको फोन मा गरिन्छ, त्यसैले तपाइँ यो कोड को एक स्क्रीनशट लिन सक्नुहुन्छ। यो सरल इशारा संग तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेट मा कि QR कोड बचत गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
कोड छवि सुरक्षित गर्नुहोस्
दोस्रो विधि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं त्यो QR कोड को सामग्री छ कि छवि बचत गर्नुहोस्। त्यो हो, जब त्यो कोड फोन स्क्रिनमा देखा पर्दछ, हामी यसलाई समात्न सक्छौं र त्यसपछि मेनु फोन स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। एक विकल्प छ कि हामी यस मामला मा पाउन को लागी छवि, जो हामीलाई हाम्रो एन्ड्रोइड फोन मा क्यूआर कोड बचत गर्न को लागी अनुमति दिनेछ। यी फोन मा एक छवि को बचत को लागी समान कदम हो, केवल यस अवस्थामा हामी त्यो कोड संग गर्छौं।
सामान्यतया, जब हामी फोन मा यो कोड सुरक्षित छ, एक फोल्डर ग्यालरी मा वा उपकरण को भण्डारण मा देखा पर्नेछ। यो फोल्डर मा हुनेछ जहाँ हामीले भन्यौं कि कोड पहिले नै उपलब्ध छ, हामी यसलाई स्क्रीन मा सबै समय मा देख्न सक्छौं। यो डाउनलोड फोल्डर मा सुरक्षित हुन सक्छ, तर अन्य अवस्थामा यी कोडहरु लाई समर्पित एक फोल्डर उपकरण मा सीधा बनाईएको छ। तेसैले तपाइँ उनीहरुलाई सजीलै सबै समयमा पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
एक पटक यो गरिसकेपछि, हामी गर्न को लागी हुनेछ पृष्ठ मा जडान गर्नुहोस् कि प्रश्न मा यो कोड हुन्छ। त्यहाँ हामी निर्देशन को एक श्रृंखला दिइएको छ र मात्र चीज हामी त्यसो गर्न को लागी जाँदैछौं उनीहरुलाई पालना गर्दैछौं। सामान्य मा, यो एक विकल्प हो कि धेरै धेरै जटिलताहरु लाई प्रस्तुत गर्दैन, त्यसैले हामी यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौं यदि हामी हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट मा यो कोड बचत गर्न चाहन्छौं।
धेरै एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेट एक QR कोड स्क्यान गर्न एक देशी प्रकार्य छैन।। यी फोनहरु केहि अनुप्रयोगहरु जसको साथ उनीहरु सीधै ती कोडहरु स्क्यान गर्न सक्षम हुनेछ को सहारा लिन बाध्य छन्। यी अनुप्रयोगहरु पनि फोन मा कोड को यस प्रकार को बचत गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी एक तरीका हो, कम से कम ती मध्ये केहि को एक विकल्प जसको साथ यो बचत सम्भव छ। तेसैले, उनीहरुलाई एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा फोन मा विचार गर्न को लागी अर्को विकल्प को रूप मा प्रस्तुत गरीन्छ। यसको अतिरिक्त, यी अनुप्रयोगहरु को धेरै उपकरणहरु मा डाउनलोड गर्न को लागी स्वतन्त्र छन्।
गुगल प्ले स्टोर मा हामी धेरै अनुप्रयोगहरु पाउँछौं, QR स्क्यानर को रूप मा। यो अनुप्रयोग हो कि हामी फोन मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई सजीलै एक QR कोड, यसको मुख्य प्रकार्य स्क्यान गर्न अनुमति दिन्छ। यद्यपि यो पनी फोन मा कोड को यस प्रकार को व्यवस्थापन गर्न को लागी अतिरिक्त कार्यहरु छन्। हामी यो मा उपलब्ध छ कि कार्यहरु को एक एक QR कोड बचत गर्न को लागी हो। यस तरीकाले, आवेदन को उपयोग गरेर हामी फोन वा ट्याब्लेट मा कुनै समस्या बिना कोड बचत गर्न सक्षम हुनेछौं।
यी अनुप्रयोगहरु ती प्रयोगकर्ताहरु को लागी एक राम्रो विकल्प हो देशी कोड स्क्यान सुविधा छैन, केहि छ कि केहि एन्ड्रोइड फोन मा हुन्छ। यी अनुप्रयोगहरु को लागी धन्यबाद, तपाइँ सबै समय मा कोड स्क्यान गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ, उनीहरुलाई आवेदन मा बचत को विकल्प को अतिरिक्त। यस तरीकाले, यी कोडहरु उपलब्ध हुनेछ जब उनीहरु उनीहरुको उपयोग गर्न को लागी जाँदैछन्।
QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्
एक पटक हामी फोन मा त्यो QR कोड बचत गरीएको छयो अरु कोहि हुनेछ जो यसको पछाडि वेबसाइट पहुँच गर्न स्क्यान गर्न सक्षम हुनेछ। त्यो हो, जब हामी एन्ड्रोइड मा एक QR कोड बचत गर्ने निर्णय गरेका छौं, यो यो होइन कि हामी यसलाई आफैं प्रयोग गर्न जाँदैछौं, तर हामी अरु कोहि यसलाई स्क्यान गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं। जब सम्म हामी दुई उपकरणहरु छन्, ताकि हामी आफैंले अन्य उपकरण संग त्यो कोड स्क्यान गर्न जाँदैछौं।
अन्य व्यक्ति वा उपकरण कोड स्क्यान गर्न को लागी तपाइँ हाम्रो स्क्रीन मा तपाइँको क्यामेरा बिन्दु गर्नु पर्छ, जहाँ त्यो कोड देखाईरहेको छ। चाहे हामी यो एक एप को माध्यम बाट बचत गरीएको छ, एक स्क्रीनशट को उपयोग गरेर वा एक फोटो को रूप मा फोन को ग्यालरी मा कोड बचत, त्यो कोड स्क्रिन मा प्रदर्शित हुनुपर्छ। यदि त्यो व्यक्ति को देशी कोड स्क्यान गर्न को लागी समारोह छैन, उनीहरु यसको लागी एक आवेदन को लागी रिसोर्ट गर्न को लागी हामी पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं। तपाइँ तब तपाइँको QR कोड मा तपाइँको फोन बिन्दु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि स्क्रिन मा संकेत गरिएको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्।
यो वेबसाइट तब तपाइँको फोन मा ब्राउजर मा खुल्नेछ र त्यसोभए तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई यो मा चाहिन्छ, या त मात्र ब्राउज, एक फारम भर्न वा एक आदेश ठाउँ। निस्सन्देह, यदि हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोन मा एक QR कोड स्क्यान गर्न को लागी जाँदैछौं, जसले हामीलाई एक वेबसाइटमा लैजान्छ वा हामीलाई एउटा एप डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, हामी सबै समय मा एक इन्टरनेट जडान हुनु पर्छ, ताकि हामी पहुँच गर्न सक्छौं भने। वेबसाइट।
QR कोड के हो?
जसरी हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं, यो हाम्रो लागी नेट र पोस्टरहरुमा वास्तविक जीवन मा एक QR कोड भर मा आउन को लागी बढ्दो सामान्य छ। यी QR कोड दुई आयामी बारकोड हुन्। यसको नाम मा संक्षिप्त QR "छिटो प्रतिक्रिया" को लागी खडा छ। यो एक शब्द हो कि जानकारी को लागी यसको पछाडि लुकेको छ तत्काल पहुँच लाई जनाउँछ। यदि तपाइँ उनीहरु लाई प्रयोग गरीरहनुभएको छ, तपाइँले देख्नु भएको छ कि जानकारी को लागी पहुँच (एक वेबसाइट वा लि )्क) सबै समय मा तुरुन्तै छ, उनीहरु आफ्नो अपरेशन मा साँच्चै छिटो छन्। यी कोडहरु पनि अनुकूलन योग्य छन्, दुबै डिजाइन र प्रकार्य मा, यही कारण हो कि उनीहरु एक उच्च बहुमुखी उपकरण को रूप मा प्रस्तुत गरीन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » तपाइँको मोबाइल मा QR कोड कसरी बचत गर्ने
कसरी सक्षम र Windows मा अभिभावकीय नियन्त्रण कन्फिगर गर्न